U Moe Aung – HlaMin
Article from Myanmar Mudita Sar Saung in April 2018
There may be compatibility problems with Myanmar Fonts (on the different platforms).
In the early days, I used Zawgyi and Zaw Decode. I now use Myanmar Unicode for the posts.
I am using WordPress for my web site with English as the default language.
Matriculated from St. John’s Dio
Graduated with Electrical Engineering in 1963
Worked in Singapore and chaired SPZP-2002 and SPZP-2010
Published Commemorative Issues of Swel Daw Yeik Sar Saung for SPZP-2002, SPZP-2007 and SPZP-2010
After retirement, moved back to Yangon.
Published Commemorative Issues of Swel Daw Yeik Magazine for Shwe YaDu and SPZP-2016
Patron of Swel Daw Yeik Foundation
Pen name : Tekkatho Moe War
Mentor : Daung Nwe Swe
Wrote hundreds of Kabyars.
Some (e.g. Shwe YaDu Lann) took four days of contemplation
Composed some Kabyars “Let Tann” (extemporaneously)
Published two (or three) books
Compilation of articles and poems
Editor for RUESU Magazine
Chief Editor of the RIT Annual Magazines, Swel Daw Yeik Sar Saung, Swel Daw Yeik Magazine, Hlyat Sit Sar Saung
Columnist for Weekly Eleven Journal.
I have posted saya’s poems and articles (often with my translations)
Some are re-posted in the article.
စာရေးသူရေးခဲ့သော ကဗျာပေါင်းမြောက်မြားစွာအနက်အကြိုက်နှစ်သက်ဆုံး ကဗျာများထဲမှ တစ်ပုဒ်….
ချစ်သောသူအတွက် အမှတ်တရလည်း ဖြစ်၊
စီးပွားရေး တဖြည်းဖြည်း ချွတ်ခြုံကျ သွားသော နိုင်ငံ့သမိုင်းစာမျက်နှာ တစ်မျက်နှာကိုလည်း လှစ်ဟပြနေသည့် ကဗျာလည်းဖြစ် သောကြောင့်အနှစ်သက်ဆုံးဟု ပြောရခြင်းဖြစ်သည်။
ယင်းကဗျာကို အမေရိကမှ ကိုလှမင်း (Ec 69) က အင်္ဂလိပ်သို့လှပစွာ ဘာသာပြန်ပေးထားသည်ကို ဖတ်ရှုခံစားကြည့်ကြပါ။
” ကဗျာ လက်ဆောင် “
သံယောဇဉ် ကြိုး၊ လွန့်စ ပျိုးသော
လှုပ်နှိုးထိယှက်၊ သူ့ မွေးရက်တွင်
ရင်တွင်း သိမ့်အေး၊ ပိုးကြေး ပန်းကြေး
သမီိးရည်းစား ဘဝ၊ ယုယကြည်မွေ့
ခင့် မွေးနေ့တွက်၊ ရွှေလက်စွပ် တစ်ကွင်း
မင်္ဂလာဦး ရက်လွန်၊ ရွေ့ကျွံ လျင်မြန်
ရောက်ပြန် အောက်မေ့၊ ခင့်မွေးနေ့မှာ
သိပ်သည်း ထူထပ်၊ ရင်လှပ် မောလျ
ဝေးစွ ပန်းတိုင်၊ ယိုင်သည်လည်း ရှိ
ကြည့်လည်း မမြင်၊ ဆင်ခြင် ထောက်ရှု
ကျွေးမှု ဆင်မှု၊ အဖု အထုံး
လွန့်ရုန်း မရ၊ ပစ္စက္ခ အလယ်
မျက်နှာငယ်ကြား၊ မမေ့အား သင့်
ခင့် ရည်စူးချက်၊ မွေးနေ့ရက်မှာ
ရတနာ ပစ္စည်း၊ ကျပ်တည်း လဲယိုင်
သည် ကဗျာနုပ်၊ လက်ဆောင်ထုပ်ကြောင့်
ဂုဏ်ပုဒ် ညှိုးနွမ်း သွားမည်လား။ ။
( ကလျာ – ၁၉၈၈ခု )
String of attachment — then in its infancy
grew beyond proportion — on her birthday
to express my deepest feelings — while courting her
I gave “Sho Whet The Pho” (Mystery/Thriller) Magazine
asabirthday gift to my beloved.
We shared our metta
I presentedagolden ring
to my yee-sar asabirthday gift.
Hand in hand we entered the “married” land
on her birthday past the Honeymoon
I presented Goya fragrance asabirthday gift
Often facing dark nights
Yonder looked thick and rough
Goal seemed distant [and not straight]
[Tired and] weary
[Often] look but could not see
Struggle just to keep alive
Despite the challenges I feel
I owe my belovedanice birthday gift
Precious jewels are out of reach
I can only offeragift from my heart
inexpensive — not meaning to underrate her love
Will she accept asapriceless treasure?
Translated by Hla Min (Ec 69)
ကွယ်လွန်သူ ပန်းချီအောင်စိုး၏ သရုပ်ဖော်ပုံဖြင့် စာရေးသူ၏ ကဗျာ……
လောက စာမေးပွဲတွေ ရော စာမေးပွဲပေါင်းစုံကို ခန္ဓာတည်မြဲနေသရွေ့ မရပ်မနား တရစပ်ဖြေနေရဦးမည် ….။ မိမိဘာသာ အအောင်အရှုံး ဆုံးဖြတ်နိုင်မည်လား ?
ဝန်ပိ ဇွတ်တိုး၊ ဖလံပိုးထင့် …။
ဖြေဆိုပြီးရင်း ၊ ဖြေဆိုရင်းနှင့်
Translation of Saya’s poem by U Hla Min
Translation of the Kabyar by U Hla Min